Mitantana risika | Martech Zone
Nisy ny olona nanerana ny firenena izay nisento fatratra tamin'ny fahitana ny Shuttle Discovery nahomby tamin'ny asany. Misy ireo mino fa fandaniam-bola be dia be ny vola an'arivony tapitrisa dolara amin'ny programa habakabaka. Tsy afaka nifamaly bebe kokoa aho. Tahaka ity fanombohana farany ity, ny fametrahana tanjona izay tsy azo tratrarina mihitsy no mahatonga antsika hanana fanavaozana sy fandrosoana. Ny programa habakabaka dia iray amin'ireo programa izay manao izany. Ny enta-mavesatra lehibe dia ny fitantanana sy ny fanombanana ny risika.
Orinasa mpamokatra fanafody no tsy maintsy manao izany. Izy ireo dia mitantana ny ain'ny olona amin'ny fanaovana vy very ny ainy mba hamonjy ny ain'ny olona. (Fampisehoana lehibe momba ny Lalàna sy ny filaminana omaly alina) Manao izany ireo mpivarotra fiara. Cadillac dia nanao vivery ny ainy tamin'ny famolavolana endrika maodely ny modeliny rehetra. Alao an-tsaina ange raha tsy voaray tsara ilay endriny ?! Gillette sy ny hareza Mach3. Fahitalavitra maranitra sy LCD.
Mazava ho azy fa ireo no fahombiazana. Eo koa ny tsy fahombiazana!
Mino aho fa ny valin'ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana dia tsy miankina amin'ny hoe misy atahorana na tsia. Raha tsy misy atahorana, dia azo inoana fa ho lanin'ireo olona izay handray ny risika ireo ianao. Ny fahafahan'ny orinasanao mandrefy sy mamakafaka ny risika ary koa ny fahavononany handray ny risika no lakilen'ny fahombiazany.
Tags: mitantana ny risikametyfitantanana ny risika